Tuesday August 03, 2021 - 23:33:44 in Wararka by Mogadishu Times
"Haddii uusan jirin kafee weligey ma noqon lahayn qof u tartama olimbikada," ayay ku kaftantay.
"Ma rumeysan karo. Aad bay u adkeyd markii aan kufay," ayay tiri. "Markii aan dhacay waxaan ku qasbanaaday in aan kaco waxaana dareemay in aan ku bixinayay tamar badan. Ma rumeysan karin wixii aan ka dareemayay lugaheyga. Waxaan u qaatay inay awoodda oo dhan iga tageyso."
"Aad ayaan u daallanaa. Kafeega la'aantii ma noqon lahayn qof ka qeyb gala tartanka olimbikada. Waxaan u baahnaa qaxwada!" ayay hadalkeeda sii raacisay.
Haweeney da' oo sameysay arrin cajiib ah si ay u badbaadiso seygeeda
Ma wiilkan yar ayaa ugu orod badan caruurta caalamka?
Mo Farah: Wax khalad ah ma sameyn
XIGASHADA SAWIRKA,HUW EVANS PICTURE AGENCY
Markii ay ku dhawaaqeysay go'aankeeda ah in ay u tartanto in mar saddexaad ay billad dahab ah ku guuleysato, ayay Sifan ka warbixisay waxa ku dhiirri geliyay.
"Aniga ahaan, waa ii muhiim in aan raaco qalbigeyga," ayay tiri. "Inaan sidaas sameeyo ayaa aad iigala qiimo badan billadaha dahabka ah. Taasi way i dhiirrigelisaa waxayna iga dhigtaa qof ku raaxeysanaya waxaan ka qabto cayaarahan quruxda badan."